Izimfihlo ukudoba: ukudoba izinduku ukulingiswa eside
Catch ukudoba obunokuthula kude kude ogwini akuyona njalo elula elula ligcina uthi lokuphotha luzungeza induku. Yiqiniso, ungasebenzisa donk kodwa bite nge enjalo ngenela akuyona into ebonakalayo kwesinye isikhathi. Yingakho abaningi banobufakazi Anglers zisebenzisa izinduku ukulingiswa eside. Lokhu induku ibizwa ngokuthi "umdlalo." Kuyinto kakhulu efana ukuphotha, kodwa umgwaqo emasongweni kaningi, futhi awashintsheki asenyaweni ephakeme. Ukufana ayatholakala izinguqulo ezimbili: a telescopic plug.
Ngenduku ukulingiswa eside ngoba abavamile, abadobi non-uchwepheshe ivumelane telescopic kangcono. Sinenkosi eziningi eziwusizo elula phezu ipulaki. Okokuqala, ukusetshenziswa kwalo akudingeki njalo ukudlula ngaphambi kokugibela kuqhathaniswa mncane line ukudoba ngokusebenzisa okungenani 15 izindandatho. nzima Ikakhulukazi ukwenza le nqubo sezulu kunomoya. Okwesibili, nenduku ingeyomhlane okulula ukuyiphatha.
Ubude izinduku ukulingiswa eside e msebenzi kusukela amamitha 4 kuya 4.3. Kungcono ukusebenzisa induku eyenzelwe ogruzku 2, futhi mhlawumbe kuze kube 16 g-40 g (for the ezikude kakhulu Ufaka). I-snap umdlalo isetshenziswa kuphela ngaphandle inertia esondweni nge spool evulekile. Lesoemkost kufanele kube ngamamitha okungenani angu-100. yamabhola antantayo ekhethekile asetshenziselwa ebelidoba ukhonkolo eside. Ngokuvamile baba nomsila ofana boom. Kuyadingeka ukuba iflothi landizela ngqo, ngaphandle ukunyakaza ukujikeleza futhi asuka trajectory ohlosiwe. Kubalwa Match zintanta ukhonkolo olunembile kakhulu futhi eside. Ngesimo yo- efana amakilabhu Gymnastic, futhi zindiza kanye imishini ezemidlalo - ukuqina phambili. Iflothi induku ukuze asakazwe eside kufanele kube njengoba elula, ngakho lapho ukudoba uncamela ngokuhambisa izakhi ukuthi kulula Itafula, uma kuba nesidingo.
Kuyadingeka ukudoba umdlalo kufanele ifakwe nenduku yokudoba umugqa ekhethekile yokudoba. Kumelwe kungabi nje elincanyana, kodwa futhi kucwila. Lo mugqa has a inzuzo enkulu kakhulu phezu evamile. Ngemva asakazwe wenza ingeyona ku uhlobo wamanzi "bubble" umoya, ngezinye izikhathi scares izinhlanzi. Ngokuvamile ukuze umugqa ezifana ukudoba waya ezijulile, kancane ngokwanele poddernut induku ithiphu. Ngenduku ukulingiswa eside kumele ayihlomele ngokuhambisana nemigomo ye ukudoba oluzayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba banake khona kophawu ekhethekile lapho uthenga umugqa ukudoba «Match». Kungcono ukusebenzisa lolu igiya nge ububanzi kufika ku 0,16 mm. Jwayelekile ukudoba Match rod ukudoba umugqa alisetshenziswa, kuzobalwa kuphela izinkinga yonke inqubo yokubamba kanye nomthelela kukho okubi ngenani ukulunywa.
Ngokuvamile, singasho ukuthi izinsika intonga ibanga ekubunjweni lula. Okunjalo ngenela, njengoba umthetho, ingasetshenziswa bedoba, bemele kude ogwini. Kuhle kakhulu ngesikhathi wokheleka bream, uhlobo lwenhlazi yasemfuleni kanye carp naphakathi. Uma inake wonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama nezinamathiselo wenze thusi sokunene, bedoba nenduku yokudoba kuthatha hhayi kuphela kumnandi, kodwa futhi ukunikeza izinhlanzi.
Ibhokisi ukudoba ebusika ngezandla zakho, ungenza esikahle futhi zikhululekile
Rybinsk Reservoir: ezokungcebeleka nokudoba endaweni evulekile
Pravdinskoye echibini: incazelo, ukudoba, isithombe
"Beaver Log" - epaki kumnandi e Krasnoyarsk. Izici ihlobo nobusika
Thina mastic. Bese kuthi-ke izibalo kwe-mastic
Ukudla okunomsoco e nomfutho wegazi ophezulu
I-museum kuphela ye-Sun eRussia i-Novosibirsk
"Esitimela" (Novosibirsk) - iqembu le-volleyball ne umlando ocebile
UVladimir Ilyin: Biography, Filmography futhi ukuphila komuntu umculi (isithombe)